author 1 - December 17, 2019
iPhone SE2(aka iPhone 9) : Everything We Know So Far
Article author 1 - December 3, 2019
2019 မှာ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုစမတ်ဖုန်းမျိုးကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူခဲ့သလဲ။ တန်ဖိုးမြင့်ဖုန်းလား ဒါမှမဟုတ် အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိတဲ့ဖုန်းလား တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် တိုးတက်လာတဲ့ စမတ်ဖုန်းနည်းပညာတွေဟာ အခုဆိုရင် အတော်ကြီး ရှေ့ရောက်နေပါပြီ။ လာမယ့်နှစ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ 5G စမတ်ဖုန်းတွေကို ပေါပေါများများ ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရပါတောမယ့်။ နောက်ထပ်ကတော့ AI နည်းပညာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆင့်ကဲတိုးတက်မှုတွေထဲမှာ မဖြစ်မနေ ပါဝင်လာတဲ့ အနာဂတ်နည်းပညာတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။...
Article author2- January 11, 2020
2019 ခုနှစ်ဟာ မိုဘိုင်းဖုန်းဈေးကွက်အတွက် ခေတ်မီဆန်းသစ်တဲ့ နည်းပညာတွေ အများဆုံးထွက်ရှိခဲ့တဲ့နှစ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ တိုးတက်လာတယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်မယ့် 2019 နှစ် ပညာနှစ်မှာ မြင့်မားတဲ့ refresh နဲ့ rate screens ၊ ဖုန်းကင်မရာပိုင်းမှာဆိုရင် ပယ်ရီစကုတ်ကင်မရာကစလို့ 108MP image sensors အထိ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ စတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့ foldable...
Article author 1 - November 5, 2019
Black Friday ဟာ အမေရိကန်မှာ ကျေးဇူးတော်နေ့ပြီးရင် နောက်တစ်နေ့မှာ ကျရောက်ပါတယ်။ အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင် နိုဝင်ဘာလရဲ့ လေးပတ်မြောက် ကြာသပတေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ 1932 ခုနှစ်ကတည်းက အမေရိကန်မှာ ခရစ်စမတ် စျေးဝယ်ရာသီအစအဖြစ် အဲဒီနေ့ကို သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး 1961 ခုနှစ်အထိ ဒီလိုသုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ နှစ် 20 ကြာပြီးနောက် အဲဒီစကားစုကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ စျေးဆိုင်များက အဲဒီနေ့ကို...
Article author 1 - January 28, 2020
Apple ရဲ့ iPhone 12 ဖုန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သတင်းတွေဟာ ပေါက်ကြားပြီးရင်းပေါက်ကြား ဖြစ်နေပေမယ့် ဒီဖုန်းဟာ 2020 ခုနှစ်အတွက် ကျူပါတီနိုအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီက ထွက်လာမယ့် တစ်ခုတည်းသောဖုန်း မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရရင် မကြာသေးခင်အချိန်က Apple အနေနဲ့ iPhone SE2ကို iPhone9ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ထုတ်လာမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ...
Article author2- November 2, 2019
စမတ်ဖုန်းတွေအတွက် ကင်မရာပိုင်းမြင့်တင့်မှုတိုးတက်လာနိုင်စွမ်းဟာ အတော်အားကောင်းလာပြီလို့ သတ်မှတ်နိုင်မှာပါ။ အခုနောက်ဆုံးထွက်ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် 64MP ဆင်ဆာတွေကိုတောင် သုံးလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Xiaomi ရဲ့ Redmi Note 8 Pro နဲ့အတူ Realme XT ၊ Vivo Nex3ဖုန်းတွေမှာ 64-megapixel Samsung GW1 sensor ကို သုံးလာကြပါတယ်။ 2019...
Article author2- February 17, 2020
Samsung ရဲ့ Unpacked 2020 event နဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ဟာ စမတ်ဖုန်းသစ်တွေဖြစ်တဲ့ Galaxy Z Flip foldable phone၊ Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra ဖုန်းတွေကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာနည်းပညာပိုင်းမှာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဒီဖုန်းတွေဟာ သုံစွဲသူတွေ ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်မလားဆိုတာကတော့ အရောင်းစာရင်းတွေ...
Article author 1 - January 14, 2020
နှစ်သစ်တစ်ခုရဲ့ အစပိုင်းမှာ အမြဲကျင်းပနေတဲ့ CES ပွဲကြီးကတော့ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ Consumer Electronic Show ဆိုတဲ့အတိုင်း စိတ်ဝင်စားစရာ နောက်ဆုံးပေါ် အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်တွေကို မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် CES မှာ မြင်တွေ့ခဲ့သမျှ ထုတ်ကုန်အားလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ယခုနှစ်အတွင်းမှာ သုံးစွဲဖို့ စောင့်မျှော်နေရမယ့် ထုတ်ကုန်တွေလို့ ဆိုရမှာပါ။ ကဲ ဒီတော့ CES 2020...
OPPO X2 Series Event : 120Hz Screen And 5G, X2 Pro Adds A Periscope...
Article author 1 - March 9, 2020
ယခုနှစ်ကျင်းပမယ့် MWC ကို ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက် စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီအများစုဟာ ကုမ္ပဏီထုတ်ဖုန်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်ပွဲလုပ်ပြီး မိတ်ဆက်လာကြပါတယ်။ အခု ဒီလိုမိတ်ဆက်သူတွေထဲမှာ OPPO လည်း ပါဝင်လာပါပြီ။ တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ OPPO အနေနဲ့ OPPO Find X2 ၊ OPPO Find X2 Pro နဲ့ OPPO Watch တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီ...
Article author 1 - October 8, 2019
နည်းပညာလောကရဲ့ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Microsoft အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက အောက်တိုဘာလရဲ့ အစောဆုံးနည်းပညာပြပွဲအဖြစ် Microsoft Surface Event ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ Microsoft အနေနဲ့ အဓိကထုတ်ကုန်အများစုကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဓိကထုတ်ကုန်တွေလို့ ဆိုရမှာကတော့ Surface တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Surface Laptop3၊ Surface Pro 7...
Article author2- November 30, 2019
2019 နည်းပညာနှစ်အတွင်းမှာစမတ်ဖုန်းများစွာထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေကလည်း တကယ်ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ ဖုန်းတွေကြီးပါဘဲ။ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာ အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းအပြင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်ပရိုဆက်ဆာတွေကို သုံးပြီးထုတ်လုပ်ပေးလာကြပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ယခုနှစ်အတွင်းမှာအပြောင်းလဲလာဆုံးကဖုန်းတွေတပ်ဆင်လာတဲ့ ကင်မရာတွေပါ။ နောက်ထပ်တခုကတော့ ဒီဇိုင်းပုံစံပါ။ ဈေးနှုန်းကတော့ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအလိုက် သုံးစွဲသူအဆင်ပြေတဲ့ ရောင်းနေပါတယ်။ အခု 2019 အတွက် gsmarena ကနေ ရွေးချယ်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းတွေရှိနေပါတယ်။ ဖုန်းတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာအနေအထားနယ်ပယ်အလိုက် အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ ဘယ်စမတ်ဖုန်း တွေက...